Politics News – E- Live Nepal
१८ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने ओली सरकारले राजपा र फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालय बढाउँदै, कति मन्त्रालय थपिदै छ ?
काठमाडौं, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा र फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने भएकोले मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि ओलील जम्मा १८ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेका थिए । तर, राजपा र फोरम आउने भएपछि उनी आफ्नै निर्णयमा पूर्नविचार गर्न बाध्य भएका छन् । स्रोतका अनुसार १८ बाट बढाएर […]
धरापमा पर्यो काँग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद, एमालेकी नेतृ भगवती चौधरीले पाउलिन त न्याय ? यस्तो छ पछिल्लो अवस्था (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काठमाडौँ, २५ फागुन । सुनसरी ३ बाट प्रतिनिधिसभमा निर्वासचत काँग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्धको मुद्धामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । गच्छादारले निर्वाचनमा धाँधली गरेको दाबी गर्दै उम्मेदवारी खारेजीसम्मको माग गरिएको मुद्दामा शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपकुमार उपाध्यायको संवैधानिक […]
यसरी भए माओबादीका प्रभावशाली नेता एकीकृत पार्टीको नेतृत्वबाट आउट
फागुन २५, काठमाडौं । नेताहरु भन्ने गर्छन्-जोगी बन्नलाई राजनीति गरेको होइन । तर, राजनीति गरेर जोगी बनेका धेरै नेता अहिले पनि सडक नापिरहेका छन् । राजनीतिमा लागेर कहिल्यै तल हेर्नु नपरेका भाग्यमानीहरु सिमित व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरु मध्ये एक हुन्-कृष्णबहादुर महरा, जो प्रतिनिधिसभा सभामुखमा निर्विरोध भएका छन् । माओवादी पार्टीभित्र उनका आलोचकहरु महरालाई ‘तीन प’ […]
महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बन्न प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव, त्यसपछि राजनीति बाटै… (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काठमाडौं–राष्ट्रपति एमाले र सभामुख माओवादी केन्द्रले लिइसकेपछि उपराष्ट्रपति र उपसभामुख अब कसले पाउला ? बामगठबन्धनले यी दुई पदका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई प्रस्ताव गरेका छन् । उपराष्ट्रपति राजपा नेपाल र उपसभामुख फोरम नेपालको भागमा परेको स्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष एवं केपी शर्मा ओलीले राजपा अध्यक्ष […]